Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey shirkii Kampala, dagaalada Mogdisho iyo guud ahan xaalada Hiiraan iyo Gedo iyo baarlamaanka Puntlnd oo kahor yimid in waqtiga loo kordhiyo TFGda.
Wararkii ugu danbeeyey shirkii Kampala, dagaalada Mogdisho iyo guud ahan xaalada Hiiraan iyo Gedo iyo baarlamaanka Puntlnd oo kahor yimid in waqtiga loo kordhiyo TFGda.
Somalia:-Shirkii maalintii shaleyto aheyd lagu soo gabo gabeeyey dalkaasi Uganda waxuu ku soo dhamaaday in wadanka ay ka dhacdo doorasho waqtiga xukumaduna ku egyahay bisha 8aad. sidoo kale masuuliyiin badan oo ka socotay in ka badan 50 wadanka waxaa mowqifkoodii bedelay hal mar qudbadii gudoomiyaha baarlamaanka taasi oo uu ku sheegay in xalka Somaliya sida uu hada yahay ay jano noqon doonto hadaan doorsho la qaban oo aan hogaan cusub la helin, isagoo yiri hadii dowlad waqtigeeda dhamaado xitaa hadii ay sii joogeyso amaba cidkale bedeleyso waa in la doortaa ayuu yiri Shariif Hasan oo ay aduunyadu garan waayeen meel ay u dhaafaan qodobkaasi maadama ay ka yimaadeen wadamo hogaamiyashooda 5tii sano oo kasta la soo doorto.
Hadalka uu madasha shirka ka jeediyey gudoonka sare ee baarlamanka waxuu aad uga careysiiyey waftigii ka socday madaxweynaha oo ku sigtay iney buuq ka dhaliyaan madasha shirka maadamaa ay arintoodu tahay neef gowracan geed kama waabto oo ay sikasta ku raadinayan sidii hal sano oo dheri ah loo siin lahaa iyo Farmaajo oo Mogdisho joogay oo isagu ka dhamaan waayey hadalo is burinaya.
Dagaalada Mogdisho iyo wararkii ugu danbeyey.
Waxaa magaalada Mogdisho ka socdo dagaal goobaha ay kooxda Shabaab ka joogto waqooyiga Mogdisho looga sifeynayo iyadoo goobtii laga saaro loo gacan galinayo ciidamo si gaar ah loogu aruurinayey magaalada Mogdisho oo hoos taga midowgii maxkamadaha ee ururka kaka dhawaaqay magaalada Mogdisho dhawr maalmood ka hor. Shabaab ciidamadooda wey kala baxeen inta badan goobo ay horey uga sugnaayeen waqooyiga Mogdisho kedib markii ay saraakiil ka tirsan dowlada ay ku wargaliyeen iney ka baxaan goobahaas uuna ku soo wajahan yahay dagaal weyn sidasina uga baxeen goobaha maanta laga qabsaday ma ahan markii ugu horeysay ee ay Shabaab goobo muhiim ah oo ku yaala saldhigyada ay kaka sugan yahiin Mogdisho ka baxaan.
Sanadkii hore ayey aheyd markii sidaan oo kale ay kaka baxeen dhawr xaaladood kedibna madaxweynaha Somaliya uu boqasho ku tagay ilaa iskoyska Sanca kedibna ay habeenkii dib ugu soo laabteen halkii laga saaray. magaalada Mogdisho ma ahan qof mar hore ay ugu danbeysay wadanka mid uu fahmi karo siyasadaha ka socda iyo qaabka ay iskula shaqeeyaan dowlada iyo Shabaab amaba koox kasta oo dagaal ka wada gudaha caasimada Somaliya ee Mogdisho.
Dagaalka hada ka socda waqooyiga Mogdisho ujeedadiisu waa sidii meesha looga saari lahaa magaca Shabaab oo goobahaasi loo geyn lahaa ciidamo u gaar ah midowgii maxkamadaha marka ay ciidmadaasi la wareegaan goobahaas isbuucyada soo socda waxaa hal mar riyada ay ku jiraan ka bixi doona Farmaajo iyo wasiiradiisa u badan qurbo joogta oo u heysta ciidamada ay ku hayaaan ciidamada dowlada magaca ay intooda badan qaadan doonaan dhawaantan.
Xaalada degaano ay ka mid tahay Hiiraan.
Kedib abaaraarahii dhawaantan ku dhuftay guud ahaan dalka Somaliya gaar ahaan Hiiraan ayaa waxaa ku xoolko beelay in ka badan 500 oo qoys kuwaasi oo aan garaneyn wax ay camal ka dhigtaan amaba si ay u noolaaadaan maadama ay intooda badan abaarahii ku waayeen xoolahii ay dhaqanayeen qaarkoodna dad iyo duunyaba ku waayeen. mar aanu xiriiro kala duwan la sameynay qeybo badan oo ka tirsan Hiiraan in dadka qaarkii ay iskaka soo tageen dhulka miyiga ah halka ay iyagoo aan garaneyn meel ay aadaan ku soo aruuray magaalooyinka waaweyn oo ay qaarkood dad ay qaraabo yahiin dulsaar ku yahiin.
Ma jirta ha'yadd si rasmi ah uga howl gasha Hiiraan oo dabooli karta baahidan laakinse waxey shacabka Somaliyeed amaba kuwa reer Hiiraan ka dhiman waayeen gar gaar aan badneyd oo ay iska soo aruuriyaan inta badan qurbo joogta dibada marka ay dhacaan dhibaatooyinkaan oo kale, sidaasi daraadeed walaalaha qurbaha ku nool waxaa laga codsanayaa iney xiriiro la sameeyaan oo ay dadkaasi sida ugu haboon ee loo caawin karo loo caawiyo. xalka ugu haboon ee loo caawin karo waa in ay qurbo joogta la xariiraan eheladooda weydiiyaana dhibaatada heysata dadkaasi kedibna ay waxii gurmad ah u marsiiyaan eheladooda si waliba deg deg ah.
Gobolka Gedo iyo xaalkiisu.
Gobolka Gedo isaga waxaanu ka soo qaadanay gobolada koofureed waxaa ka jiro dhibaatooyin siyaasadeed oo aysan ka jirin dalka intiisa kale dhibaatooyinkii ugu danbeyey ee halkaasi ka dhacana waxaa ilaah ka sokow sabab u ahaa R/wasaaraha Somaliya Farmaajo oo isagu dagaalo aan dhameys tirneyn galiyey shacabka halkaasi ku nool., sidoo kale maamul goboleed uusan u diyaarin wax qorshe ah ayuu doonayey inuu halkaasi kaka dhawaaqo isagoo shacabka ka balan qaaday inuu ka xoreyn doono kooxda Shabaab. nasiib wanaag shacabku markasta waxey doonayaan nabad ay ku noolaadan taasina ma dhicin iskaba daa in gobolkooda loo xoreeyee waxaa siyaasad ahaan sii kala fogaaday maamulkii hore ee mudada ka talin jiray gobolka iyo rag uu watay Farmaajo oo uu doonayey inuu u gacan galiyo Gedo inta uusan dhamaan waqtiga ug haray mudadiisa oo ku eg bisha 8aad.
Dabcan qofkasta oo damiir leh maanta wuu u jeedaa dhibaatada shacabkaasi heysata kedib markii ay ururka Shabaab melkasta iskaka yimaadeen oo ay magaaalooyinka qaarkood kusoo rogeen cuna qabateyn iyo in dadka qaarkood loo bar tilmaameedsado qaab qabiil iyadoo lagu xomeynayo Farmaajo.
Guud ahaan koofurta Somaliya waa goob aad u qasan inkastoo degaano ay ka mid yahiin Bay iyo Bakool ay waxoogaa aad u dhamaan Gedo oo ay iyadoo ay Shabaab joogaan hadane dadku ay nabadgalyo leysku haleyn kar heystaan maadaama hogaamiyaasha Shabaab ee goboladasi xakuma ayka soo jeedaan isla degankaas halka gobolada kale ay ka taliyaan hogaamiyaal aan u dhalan taasi oo inta badan qeybo ka tirsan koofurta Somaliya ay shacabkoodu dhibaato ku qabaan horjooga yaasha Shabaab ee degaanadooda ka taliya.
Dhinaca dowlad goboleedka Puntland State
Baarlamanka Puntland oo maanta shir ku yeeshay xaruntooda ayaa soo saaray baaqyo ay ku taageerayaan shirkii Kenya halka ay aad u soo dhaweeyeen howlaha u dalka Somaliya ka wado Ambasador Mahiga. mudanayaasa barlamaank dowld goboleedka Puntlnd ayaa ku nuux nuuxsaday in loo baahan yahay in ay wadanka Somaliya ka dhaco doorasho min mdaxweyne ilaa gudoomiye baarlamaan ayna kasoo horjeedaan mudo kordhinta ay raadinayaan TFGda.sidoo kale maalmaha soo socda waxaa lag ayaabaa iney codkooda ku biiriyaan maamul goboleedyo kale oo hada aan walito mowqif rasmi ah ka qaadan siyaasadahan hada socda taasi oo wax badan ka bedeli doonta siyaasada iyo arimaha ku aadan waqtiga kala guurka.
· admin on June 04 2011 14:06:53 · 1 Comment · 2231 Reads ·
#1 | raaxo on June 05 2011 09:21:29
walaalahayga hiiraan state waan idin salaamayaa waana idiin mahad celinayaa sida aad u taageerteen go,aankii reer hiireen ee ay ku doorteen hiireenstate iyi taageerada weyn parfosor warfaa. Lakiin ilma adeera yaal waa in aad iska joojisaan waxa ka sheega dowladeena qaranimada söömaaliyo u istaagtay.Waa in aad teegarin nimanka sadbursiga u taagan ee punndiland oo soo maali gebigeed hungiriga ka doorsaday iyo ninkaan hungri raaca ah shariif sakiin.Mida labaad dawlada uu hogaaminaya farmaajo dawlad ka wanaagsa ee soo martay miyaad argatay, taageer qofka aad rabtaan laakiin xaqiiqda ha ka fogaanina.ples.
14,614,401 unique visits